umbuzo Ultimate FSX
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #665 by jimidget
NdineDell eneminyaka eyi-5 ubudala. Xa ndithenge, umntu othengisayo uthe wayenomgca wegrafti efanelekileyo neFSX. Kwakungekho. Ndithenge ikhedi levidiyo elinesibini elenza ngcono kodwa akuzange kube kuhle njengoko ndandifuna.
Ixesha lokuthenga ideskithophu entsha. Ndifuna ikhamera yevidiyo kunye nenkunzi yegusha. Ingxaki kukuba umda wam ngu-$ 500. Oko kuthetha, andiyidingi ipakethe, IE, iliso, ikhibhodi kunye ne mouse. Ndinezinto zonke. Ndifuna nje inqaba.
Ukunyaniseka, andazi into endiyidingayo. Ndiya kudlala imidlalo, kungekhona kwimiba yobuchwepheshe kwikhompyutha, kodwa ndiyakuthanda naluphi na uncedo onokundinika lona.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #682 by Joshrssmith
Mhlawumbi ufumane i-GTX 1050 Ti kunye ne-8gb yegusha kwaye ungenakuqiniseka ngezinye izinto ezifana ne-cpu. Ndiyaxolisa kodwa andinayo iindawo ezininzi ezingaphantsi kwama-$ 500 ndawonye
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: jimidget
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #704 by jimidget
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #705 by Amberdog1
UJim nje ngolwazi, i-FSX incike kakhulu kwiprojector, enkulu ihamba ngcono. Ukuba unekhadi legrafiksi ye-1gb uya kulungile. Ndiya kuncoma i-i5 okanye iproxyor i-i7 7th. Ngethemba oku kunceda ... AD
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #706 by JanneAir15
Kodwa xa uthe u-FSX ophezulu uthetha ukuba ufumana i-payware addons nayo. Ngenxa yokuba bekhwalithi engcono (ngokuqhelekileyo) badinga amakhadi amaphepha afanelekileyo. Ngaba unokuphendula ngaphambi kokuba ndicebise into? Yaye njengoko u-amberdog1 uthe i-CPU enhle kufuneka ukuba ukuba ufuna ukusebenza kakuhle.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #719 by jimidget
Ndiyabonga ngolwazi. I-BTW, ndingumhlala-phantsi kwi-vet kwimali engenayo. Ndikhangela i-Ebay kumatshini ukuqhuba i-FSX epheleleyo.
Ukuba ufumana ithuba, unokujonga kwi-Ebay uze uncede ndifumane enye.
1 ngonyaka 3 kwiiveki ezidlulileyo #786 by superskullmaster
jimidget wabhala: Siyabonga ngolwazi. I-BTW, ndingumhlala-phantsi kwi-vet kwimali engenayo. Ndiye ndakhangela i-Ebay kumatshini ukuqhuba i-FSX epheleleyo.
Intengiso iphelela kwiintsuku ze-3. I-539.99 idlula ngokukhawuleza.
1 ngonyaka 3 kwiiveki ezidlulileyo #789 by xHobbit420x
Ndisebenzise i-$ 300 kwi-laptop ye-dell ekuthengeni kakuhle kwaye ihamba kakuhle.
idijithali yokudibanisa (apho ndiya kuphucula xa ndifumana imali)
unokwenza oko, kwaye usebenzise enye i-200 ye-$ kwi-professional add on scenery.
kufana ne MegaEarthScenery. lihamba lizwe. qalisa kunye nekhaya lakho.
iinyanga 11 3 iintsuku ezidlulileyo #820 by sylvantino
Ndingathanda ukungena kwaye ndilungise le ngcamango yokuba yodwa into ebonakalayo yinkqubo efanelekileyo. Ndingathanda ukubonisa ezinye izinto ezifanele zicatshangelwe xa ufumana isigxina ukusebenzisa i-FSX okanye i-P3D nayiphi na inguqulelo.
1. I-FSX kunye ne-P3D phambi kwe-V4 eyinxalenye ye-64, ithambekele ekubeni neengxaki ezininzi ngezinto ezifanayo. Ezi ziyi-VAS, i-OOM nee-Blurries.
2. I-SSD ayiyi kukulungisa iingxaki okanye izikhumbuzo zenkumbulo. Ayiyi kulungisa i-DX 10 Preview yokwakha.
I-3 Unokuba neprojector ekhawulezayo emhlabeni, kodwa i-yayo ayiyi kukulungisa nayiphi na ingentla ngasentla.
Isixa sememori kwikhadi elihlukileyo kunye nekhono layo libaluleke kakhulu. Inkumbulo engakumbi ikhadi linalo, ukugqithisa okuncinci kwakho kuya kufumana.
Emva koko kukho isilungiso se-DX10, esifunga abanye kunye nabanye abakuthintela i-DX10 ukukhetha ukuhlala kwi-DX9.0c eninzi kwaye banengxaki ezincinci, kodwa ngeDX9.0c unamaxesha amakhulu nakwi-VAS kunye ne-OOM.
Yiyo into malunga ne-FSX kunye nenyaniso ebenayo nathi kwiminyaka engaphezu kwe-10, kukuba ngokuqhubekayo iqhubelela uomatshini bethu kumda ukuze sikwazi ukuyifumana engcono kunokuba sinokukwazi ukuba yintoni eyaneleyo. Ubuqhetseba kukuba neprojector efanelekileyo, ngokukhethekileyo i-skylake i7 7600 (6700k yakha i-processorast yeprojector kwaye iyancipha ngaphezu kwe-i7 6700 ngamanqaku athile (nayiphi na inkqubo elandelayo emva kwayo iyakha emva kwaye ihamba kancane) , ehamba kunye ne-1060 / 1080 8-16GB kwimemori khadi yemifanekiso. (tyelela isayithi ye-P3 kwaye ukhangele iimfuno zabo, bafana neenkomo ezifanayo kunye ne-interface ye-unil v4) Ekubeni i-FSX i-32 bit, yakho uya kusebenzisa ngaphezulu kwe-2GB yememori nanini na kwi-system. Inkqubo ye-fastest (i-quad, ukhohlwa nayiphi into encinane, kwixabiso onokungazithenga ngoku) kunye neklasi eliphakathi kweefayile ezihlukileyo. imfazwe yemfazwe malunga neminyaka edlulileyo ye-4.
Ngomzuzu kukho ukunqongophala kweememori, ngoko ukuthenga ikhadi lemifanekiso elitsha kunye nememori eyaneleyo ebhodini ukususa imiba ye-VAS ayiyi kuba yinto esincinci, ndiza kubambelela emva komnyaka omtsha, kwaye ndibone apho izinto zimi ekuthengeni imifanekiso ikhadi (andiyi kuphuma kwindlela eya kuchitha i-$ 500, qhubeka ugcina kwaye uthenge i-card ephezulu yemifanekiso ekhadini eneememori eninzi, kuba nayiphi na inqwelo yokubaluleka kwayo ibaluleke kakhulu! Iprojector efanelekileyo esuka kwi-seriesla skylake i7 iya kuba yindlela yokuhamba ).
Ixesha ukwenza page: 0.195 imizuzwana